Coreana Black Diamond Bloom Two Way Cake
"Pixel up Powder က အမဲစက်ပြသနာများ ပြင်ပမှတဆင့်ရရှိလာတဲ့ အပြစ်အနာအဆာများအား အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Phyto Moisturizer ပါဝင်တဲ့ Skin Fitting Powder အစွမ်းကြောင့် စွဲကပ်စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းကာ မျက်နှာအသားရေနှင့် တသားတည်းဖြစ်စေခြင်း။
မျက်နှာပေါ်ရှိ အပြစ်အနာအဆာများနှင့် အရေးအကြောင်းများကို Cover လုပ်ပေးရုံသာမက whitening, moisturizing နဲ့ SPF စတဲ့
အာနိသင်တွေပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို မပျက်ဆီးစေဘဲ Skin care အာနိသင်ကိုပါ ရရှိစေခြင်း။
မိတ်ကပ်ကွက်ခြင်း အရေးအကြောင်းထခြင်းများ လုံးဝမရှိစေဘဲ စိုပြေနူးညံ့ပြီး စိန်ပွင့်ကဲ့သို့ တောက်ပသည့် အလှတရား ကိုရရှိစေခြင်း။"
Coreana Black Diamond Bloom Essential Liquid Foundation No 23 40 ml
"နေရောင်ခြည်ဒဏ်နှင့် အသက်အရွယ်ရလာခြင်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမဲစက်ပြသနာများ ပြင်ပမှတဆင့်ရရှိလာတဲ့ အပြစ်အနာအဆာများအား ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သော pigment formula ပါဝင်ခြင်း။
မိတ်ကပ်သား စိမ့်ဝင်နိုင်မှု နဲ့ အထူးကောင်းမွန်ကာ Moisture ဓါတ်ပါဝင်မှုကြောင့် အရမ်းဖိဆွဲပြီး လိမ်းစရာမလိုသဖြင့် အသားအရေ မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
အာနိသင်တွေပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို မပျက်ဆီးစေဘဲ Skin care အာနိသင်ကိုပါ ရရှိစေခြင်း။"
Coreana Premium Daily Sun IRF 20 SPF36 PA++ 200ml
Coreana Premium Sun Cream ဟာဆိုရင် 21 ရာစု ပျိုမေတို့ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အသားအရေပြသနာများနှင့် ကိုက်ညီအောင် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပြီး LED ကနေထွက်လာတဲ့ Blue Rays များကို စုပ်ယူတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိလို့ ကွန်ပျုတာ ဖုန်းအကြည့်များတဲ့ ပျိုမေတွေလည်း မျက်နှာ အရေးအကြောင်းဖြစ်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ။ ဒါအပြင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးတရားခံ UV A Rays ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်PA ++++ ပါဝင်ပါတယ်။
နူးညံ့တဲ့ခံစားမှုနှင့်အတူ နေ့အချိန်မှာပါ ရေဓာတ်ကို အချိန်အကြာ ထိန်းပေးပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်မညီတာ ရွေ့တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ မိတ်ကပ်သားညက်ပြီး ချောမွေ့စေပါတယ်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Daily Sun & အပြင်ထွက်ရသူများ နေ့ခင်းဘက် အဆီနှင့် ချွေးထွက်များ လို့ နေရောက်ခြည်ဒဏ်ကို အချိန်ကြာကြာကာကွယ်ချင်သူများအတွက် Leports Sun ဆိုပြီး ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Coreana Premium Leports Sun SPF50 PA++ 80ml
Senite Leport Sun 50PA+ 70ml
Senite Sun Cream ဟာဆိုရင် 21 ရာစု အသားအရေပြသနာများနှင့် ကိုက်ညီအောင် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပြီး LED ကနေထွက်လာတဲ့ Blue Rays များကို စုပ်ယူတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဂန္ဓာပန်းမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ MariGold ပန်းမှရရှိတဲ့ Lutein ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်နှာတွင်ကပ်ညှိလာတဲ့ ဖုန်မှုန့်များကို ပြန်လည်တွန်းထုတ်ပေးမယ့် Formula အပြင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးတရားခံ UV A Rays ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်PA ++++ ပါဝင်ပြီးလို့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကနေစိတ်ချလက်ချ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။နူးညံ့တဲ့ခံစားမှုနှင့်အတူ နေ့အချိန်မှာပါ ရေဓာတ်ကို အချိန်အကြာ ထိန်းပေးပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်မညီတာ ရွေ့တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ မိတ်ကပ်သားညက်ပြီး ချောမွေ့အောင် အထောက်အကူပြုခြင်း။
Senite Sun မှာ နေ့စဉ်အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Daily Sun & အပြင်ထွက်ရသူများ နေ့ခင်းဘက် အဆီနှင့် ချွေးထွက်များ လို့ နေရောက်ခြည်ဒဏ် မခံနိုင်မည်ကို စိုးရိမ်သူများအတွက် Leports Sun ဆိုပြီး ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Senite Daily Sun SPF50+PA++ 70ml
Coreana Perfume Sense of New York 100ml
The aroma of fresh citrus gives the impression ofadignified and beautiful career woman who is immersed in her work, while the rose floral fragrance, feminine and bright, adds the beauty of women with two opposite charms.
Coreana Perfume Rome White 100ml
Smooth, soft musk fragrance and clean white floral fragrance are combined
to make you feel the beauty of elegance.
Coreana Perfume Florence Bouquet 100ml
A romantic and sensual floral fragrance imposes loveliness and sweet fruity fragrance applies freshness to fill our daily life with beauty.
Coreana Perfume Oriental Refresh 100ml
It isacombination of green citrus scent that relieves stress and fatigue and applies freshness. SENITE shares the conviction with all women in the form of an exceptional creation.
Coreana Senite SM Cleansing Foam 200ml
Coreana Senite SM Peeling Gel 120ml
Coreana Senite SM Cleansing Lotion 200ml
Coreana Senite ND Cream 50ml
High moisture nokdu cream with 2-fold amount of eco 36.9 nokdu ingredient and kidney bean extract for moisturizing, vitalizing, activating skin cell and enhancing skin elasticity.
Coreana Senite ND Essence Set 40ml
Serum type moisture essence with olive seed and grape seed extracts for enhancing moisture holding capacity of skin and removing aging keratin to maintain hydrated and smooth skin.
Coreana Senite ND Emulsion 150ml
Hypo-allergic gel type emulsion with sunflower seed extract and porous powder for controlling excessive sebum secretion and moisturizing skin to realize hydrated and fresh skin.
Coreana Senite ND Toner 150ml
Moisture nokdu toner with eco 36.9 nokdu ingredient for moisturizing, preventing moisture loss of skin and soothing skin irritation to realize hydrated, comfortable and healthy skin.
Coreana ENTIA Peeling Gel 150ml
Light gel type peeling gel providing physical & chemical dual peeling with natural cellulose and Japanese apricot extract
Coreana ENTIA Cleansing Foam 150ml
Mild & perfect cleansing foam with fermented hawthorm fruit extract for delivering vitality and whipped cream micro foam for cleansing the dirt out witout skin-irritation